I-EMUI 9.0 ngoku iyafumaneka kwiimodeli ezilithoba zeHuawei kunye neNhlonipho kuhlobo lwayo lwe-beta | I-Androidsis
Emva kwengcaciso yakutsha nje ye-new Umlingani 20 kunye neMate 20 Pro, Mate 20 RS Idrafti yoyilo, Umlingane 20X kunye newotshi entsha yeHuawei, i I-Huawei Watch GT, inkampani yaseTshayina iyaqhubeka nesibhengezo esitsha. Imalunga nayo Ukukhutshwa ngokusemthethweni kweBeta ye-EMUI 9.0 Iifowuni ezili-9 zeHuawei kunye neNhlonipho.
Oku kungqinwe yinkampani kutsha nje, ityhila ukuba zeziphi izixhobo ezichaziweyo, kodwa kunye nemida yokufumaneka kwale nguqulo yolingo. Sikuxelela ukuba ziziphi!
Iimodeli ezisithoba zokuphela kwezi ntlobo zimbini ziphethe Kirin 970 kwisibindi sakho, ke Olu hlobo lwe-beta lilinganiselwe kuphela kwiziphelo eziphezulu esizithiya apha ngezantsi.
1 Zeziphi iifowuni zeHuawei kunye neNhlonipho ezihambelana ne-EMUI 9.0 beta?
2 Ungayifaka njani inkqubo ye-beta?
Zeziphi iifowuni zeHuawei kunye neNhlonipho ezihambelana ne-EMUI 9.0 beta?
Nangona inani lezixhobo apho ifemu yaseTshayina inike ukukhanya okuluhlaza ukuba nenguqulelo yamvanje yolungelelwaniso lwe-EMUI, esekwe kwi-Android 9.1 Pie, incinci kakhulu, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kwiinyanga ezizayo inokuyanda. Ke ukuba ungomnye wabo banenye imodeli, yiba nomonde. Zezi:
I-Huawei Mate 10 Design Porsche
Uyilo lweHuawei Mate RS Porsche
Ungayifaka njani inkqubo ye-beta?
Ukufikelela kwinkqubo ye-EMUI 9.0 beta yezi zixhobo, Uvavanyo lweBeta kufuneka luhlaziywe kuhlobo lwe-8.0.2.81, yeyokugqibela, kwaye ube phakathi kwabokuqala, kuba ngabasebenzisi bokuqala abangama-5.000 bemodeli nganye abaya kuba nakho ukungena. Oko kukuthi, abasebenzisi abangama-45.000 bebonke baya kuba ngabo baya kuba nakho ukonwabela kwaye bavavanye olu hlobo kwiimodeli esele zikhankanyiwe. Bonke abanye kuya kufuneka balinde ixesha elithile ukuba babe nale nguqulo yolungelelwaniso ngokwezifiso, ngokufanayo ne-Mate 20 entsha, nangona inguhlobo lwayo lokugqibela noluzinzileyo.
Ngendlela | Fuente
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-beta ye-EMUI 9.0 ngoku iyafumaneka kwiimodeli ezilithoba zeHuawei kunye neNhlonipho